သင်သည်ပဲရစ်မှ Nice သို့ရထားဖြင့်တိုက်ရိုက်ခရီးသွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အစားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Marseilles နှင့် Lyon မြို့များမှအစားထိုးနိုင်သည်. အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဥစ္စာ! သငျသညျအခြို့သောအားလပ်ချိန်ရှိသည်ဆိုပါက, တဦးတည်းသွားရောက်ခြင်းစဉ်းစားပါ, သို့မဟုတ်ပင်နှစ်ခု, ပဲရစ်ကနေ Nice ရန်သင့်လမ်းပေါ်ဤအကြောင်းလှပသောပြင်သစ်မြို့ကြီးများ. မာဆေးအရှိဆုံးကမ်းလှမ်းကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Vibe နှင့်အတူတစ်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်၏ လှပသောရှုခင်း. ရထားဘူတာမှာရှိတယ် အိတ် Locker တွေ ဒီတော့နာရီအနည်းငယ်ဒီမှာပယ်ရပ်တန့်ကပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်နိုင်ဘူး.
မီးရထားဘူတာ ပဲရစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပြီးသင်တို့ရှေ့မှရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်အတော်လေးရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်. ရန်သေချာစေပါ စောစောရောက်သည် သင်၏ရထားမှမည်သည့်စင်မြင့်မှထွက်ခွာမည်ကိုရှာဖွေရန်.
သင်၏ခရီးစဉ်မတိုင်မီသင်၏လက်မှတ်ကိုအတည်ပြုရန်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်လိမ့်မည် သင် Save A ရထားပေါ်တွင်ဝယ်မဟုတ်လျှင်. မင်းလက်မှတ်တွေကိုမင်းပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုမရောက်ခင်အများအားဖြင့်အဝါရောင်စက် 'compostage de billets' မှာမင်းလက်မှတ်တွေ ၀ ယ်ခဲ့တယ်။. မင်းမှာ Save A Train နဲ့ဝယ်ထားတဲ့လက်မှတ်ရှိရင်, ရထားပေါ်တွင်စစ်ဆေးသူကိုယ်တိုင်ကသင်၏ရထားပေါ်တွင်ရထားပေါ်တွင်တရားဝင်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးစစ်ဆေးလိမ့်မည်.
ပဲရစ်ကနေ Nice မှရထားဖြင့်ခရီးသွားစဉ်းစား? ကိုသွားပါ အွန်လိုင်းတစ်ဦးကရထား Save ငါတို့ရှိသမျှသည်ထွက်စစ်ဆေးရန် သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်း နှင့်စတင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း သင်၏နောက်စွန့်စားမှု! ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိရထားလမ်းကွန်ရက်အမျိုးမျိုးတွင်အထူးလျှော့စျေးများရှိသည်. ငါတို့နောက်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်အထူးလျှော့စျေးများကိုသင်စောင့်ကြည့်နိုင်သည် Facebook က နှင့် တွစ်တာ စာမျက်နှာများလည်း.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-train-paris-nice%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)